Audiobook: Wayne Dyer မှ "သင်၏မှားယွင်းသောဇုန်များ" ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ငါမင်းကို Audiobook သုံးပိုင်းကိုထားခဲ့တာပဲ သင့်ရဲ့မှားယှငျးစှာဇုန် ဝိန်း Dyer ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကန့်သတ်ထားသောထိုအတွေးများကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားပုဂ္ဂိုလ်ရေးစွမ်းအားပေးသည့်အခြားသူများနှင့်အစားထိုးရန်အလွန်ကောင်းသောပစ္စည်း။ သင်၏မှားယွင်းသောဇုန်များနှင့်အစားထိုးပါ သင့်ရဲ့မှော်ဇုန် ပထမ ဦး ဆုံးမည်သည့်အမှားအယွင်းများသောနေရာများဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး၎င်းတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားသည်။ (ဒီကစားသမားသည် Mozilla Firefox သို့မဟုတ် Google Chrome ဘရောင်ဇာများနှင့်သာဖော်ပြပါမည်။ ၎င်းကိုအင်တာနက်ရှာဖွေရေးတွင်မတွေ့ရ)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Audio » ဝိုင်ဒိုင်ယာမှ "သင်၏မှားယွင်းသောဇုန်များ"
Aray Joselyn ဟုသူကပြောသည်
Aray Joselyn အားပြန်ပြောပါ
Marisol Tabilo Galleguillos ဟုသူကပြောသည်
သင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ Wayne, သင့်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Marisol Tabilo Galleguillos အားပြန်ပြောပါ
Belina Lurquin ဟုသူကပြောသည်
ပြီးတော့နောက်ထပ်စာအုပ်တစ်အုပ် ... သငျသညျလညျးဖွင့်ထားသင့် EROGENIC ZONES အိုင်တီကောင်းတဲ့ဟာဟာ
Belina Lurquin အားပြန်ပြောပါ
ဂျဲနီအိပ်ရာ Chanta ဟုသူကပြောသည်
Jennie Cama Chanta အားပြန်ပြောပါ
Bertha De La Torre ဟုသူကပြောသည်
Excellent ကရိုးရှင်းစွာကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!
Bertha De La Torre အားပြန်ပြောပါ
Leidy Briñez ဟုသူကပြောသည်
မပြည့်စုံပါ။ noooo !!!!
Woooow၊ ဝိန်းကိုသင်နားထောင်သည့်အခါသင်၏စိတ်ထဲရှင်းလင်းသွားပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းက၎င်းတို့သည်၎င်းတို့မပြောသောအရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်မတူဟုခံစားလာရသောအခါမည်သို့ဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်း။ အဲဒါကိုကျွန်မသဘောကျသွားတယ်
သင်တို့အားငါအကြံပေးသည်။ ရှေ့သို့သွားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်၊ ဤဝိန်းအသံသည်၎င်းကိုသာကန့်သတ်မထားပါ၊ အသံတွင်ပါသည့်အကြောင်းအရာသည်သင်၏ဘဝကိုမထိုးဖောက်မချင်းအကြိမ်ကြိမ်နားထောင်ပါ။
“ လူထင်သည်အတိုင်း” ကျွန်ုပ်၏ဝေဖန်မှု